Stop Duplicating! - Fahatakarana handraisana ny votoatiny amin'ny Khachaturyan Nataliya, tetik'asa Strategy Content
Bing, Yahoo, Google ary hafa karoka fikarohana tsy tia ny votoaty dika mitovy. Ny votoaty duplicate na kopia dia midika fa lahatsoratra sy lahatsoratra mitovy amin'izany no aseho amin'ny tranonkala samihafa ao amin'ny aterineto. Vokatr'izany dia tsy mahazo ny hevitr'ireo tranonkala mamoaka ny votoaty voalohany sy ny fomba hamerana sehatra na bilaogy maro samihafa. Mety hanimba ny laharana amin'ny tranonkala isan-karazany indrindra rehefa manomboka ny tranonkalan'ny e-commerce ny olona ary mampifandray ireo dikan-teny samihafa amin'io votoaty io ihany. Azonao atao ny mampitaha ny votoaty dika mitovy amin'ny kalitao satria mety miteraka olana izany satria maro amin'ireo dika mitovy na lahatsoratra no misy ao amin'ny tranonkala samihafa.
Khachaturyan Nataliya, Semalt Strategy Content, manazava fa amin'ny maha mpamaky azy, tsy ho tianao ny tranonkala isan-karazany miverimberina toy izany. Na ireo fitaovan'ny fikarohana aza dia tsy tia tranokala sy bilaogy mampiseho dika mitovy amin'ny fanatsarana ny laharana. Raha miatrika an'io olana io ianao, tsy irery ianao raha maro ny webmasters no mitaraina momba azy io ary ny vinavina samihafa momba ny fitantanana ny aterineto dia nampidirina mba hisorohana ny votoaty duplicate.
Antony mahatonga ny votoaty dika
Maro ny antony mahatonga ny votoaty kopia sy duplicate amin'ny Internet. Matetika ny mpampiasa dia tsy maka tahaka ny votoatiny, ary adinon'ireo robots sy robots ny ankamaroany. Mitranga izany satria tsy mieritreritra toy ny mpampiasa na mpitety tranokala ny mpandraharaha ary izy ireo dia mahatsapa ho toy ny botsika na sponjy. Azonao atao ny manamarika fa ny rafi-pizarazarana database dia mamatsy ny tranonkala manontolo sy ao anaty tahiry mitovy, misy tranokala sy rindrambaiko izay mamela ireo lahatsoratra mitovy ihany koa havoaka im-betsaka amin'ny aterineto.
1. Ny ID Ses
Raha te hijery akaiky ireo mpitsidika sy hitahiry ny fampahalalana momba ny tranokalanao ianao, dia tokony hanome "sessions" isan-karazany ny mpitsidika. Voatazona ny fivoriana raha mampiasa ny rohy na ny pejy Internet ianao amin'ny alalan'ny mpampiasa iray amin'ny alalan'ny ID. Azonao atao ny mampiasa cookies mba hahafahana manao izany ary midika izany fa ny rohy anatiny rehetra dia mahazo ny session IDs napetraka amin'ny URL.
2. Ny mari-pamantarana URL ampiasaina amin'ny famaritana sy ny fijerena
Antony iray hafa mahatonga ny votoaty duplicate na kopia dia ny fampiasana karazana URL hafa izay tsy afaka manova ny votoatin'ny pejy manokana. Azonao atao, ohatra, ny https://www.abc.com/keyword-x/ sy https://www.abc.com/keyword-x/?source=rss nefa tsy mitovy URL sy Ny fitaovam-pitadiavana dia hamaritra azy ireo amin'ny fomba hafa. Ny loharano rehetra nanampy ny URL dia tsy afaka manova ny votoaty tena ilaina.
3. Fikarohana sy fanamafisam-peo
Indraindray ireo vohikalan'ny antoko fahatelo dia manoratra ny votoatiny, nefa tsy mamela na inona na inona aminao. Tsy manome valiny foana amin'ny votoatinao voalohany izy ireo, ary tsy azon'ireo fitaovana fikarohana ny fomba hiatrehana ireo olana ireo. Ny tranonkala malaza indrindra aminao, dia ny mpangalatra sy spammers kokoa no hangalatra ny votoatiny.
Ao amin'ny WordPress sy ireo rafitra hafa fitantanana votoaty, misy safidy hanamboarana ireo fanehoan-kevitra. Izy io dia mitondra mankany amin'ireo lahatsoratra navoaka tao amin'ny aterineto.
Raha toa ka manangona pejy fanontam-pirinty ny WordPress na ny fitaovana hafa ao amin'ny votoatin'ny tranonkalanao ary hampifandraisinao amin'ny lahatsoratrao, dia hahita izany i Google ka mety hanakana ny tranokalanao. Noho izany, tokony hohalavirinao ny pejy fanatanjahantena azo itokiana ary hifantoka amin'ny votoatin'ny vaovao nosoratana.
Ny vahaolana amin'ny votoaty dika mitovy
Raha efa nanapa-kevitra ianao hoe iza ny URL dia URL kanônika ho an'ny votoatiny, dia tokony manomboka ny dingan'ny fanoratana amin'ny fomba haingana araka izay azo atao. Midika izany fa tokony hamela ny fitaovan'ny fikarohana momba ny dikanteny kanônika ao amin'ny pejin-tranonkalanao ianao ary avelao izy ireo hahita izany haingana araka izay tratra. Amin'ny toe-javatra sasany, azonao atao ny manakana ny rafitra manontolo tsy hamorona URL diso amin'ny votoatinao, fa indraindray dia alefa tsy nahy. Raha nanoratra ny votoatin'ny olona iray ianao, dia zava-dehibe ny hanamarina ny loharano mba hahalalan'ny fitaovam-pitadiavana ny toerana misy ny votoaty. Na dia izany aza, manoro hevitra anao izahay tsy haka tahaka ny votoatin'ny hafa ary manoratra lahatsoratra manokana tsy tapaka. Izany dia hanampy anao hahazo ny laharana finday tsara Source .